Ukugunyazwa, Ubambiswano kanye Nokukhuthaza - Izigidi Zabenzi
Ukugunyazwa, Ubambiswano kanye nokukhuthaza
Iminyaka engu-11 yokuhlangenwe nakho
Amaphrojekthi we-1000 +
Ikhwalithi Yomhlaba jikelele
Umkhandlu Ohlanganayo Wenhlalonhle Yabafuduki
UMkhandlu Ohlanganayo Wenhlangano Yezabahambi uyinhlangano kazwelonke yokuzimela, ekhankasela ubulungiswa kanye nokulwa nokucwasana kwabantu bokufika kanye nomthetho nenqubomgomo yokuvikela ukuthula.
Inhlangano yabaeluleki Abalawulwa Kwezokufika Abalawulwa
Abeluleki Bethu Bokufika bangamalungu e-The Association of Regured Immigration Advisers okuyi-Association Professional for Abalawuli Bokufika Abalawulwa e-United Kingdom. Inhloso Yenhlangano Yabeluleki Bokufika Abalawulwa Kwezokuxhumana ukukhuthaza ubungcweti babo bonke abeluleki bokufika abalawulwayo nokwakha ukubambisana / ukuxhumanisa nokwenza ngcono ukuxhumana phakathi kwayo yonke imigwamanda eyaziwa njengeyabafuduki, izinhlangano nezikhungo.
Umphakathi wokuphathwa kwabasebenzi
Ochwepheshe bethu bakwa-HR bangamalungu e-Society ukuphathwa kwabasebenzi futhi balandela izindlela ezinhle kakhulu ze-HR emhlabeni jikelele.
Inhlangano Yezobuchwepheshe Yezolwazi yaseCanada
UK Ezosizo Lwezomthetho Nokungena Kwelinye Izwe lase-UK
Abenzi Million nozakwethu esisebenza nabo basebenzela futhi ngaphansi kokuqondiswa kwabameli be-EEA ngokuhambisana neSigaba 84 soMthetho Wokufuduka kanye Nokukhoseliswa 1999. Sisebenza nabeluleki bokufuduka base-UK abalawulwa neHhovisi likaKhomishani Wezinsizakalo Zokufuduka (OISC). I-OISC inesibopho sokulawula abeluleki bokufuduka ngaphansi kweKhodi Yezindinganiso Nemithetho KaKhomishani.
Usizo Olungelona Olwenziwa Njengabafuduki Nase-US
Abameli bethu abafanelekile base-US bangamalungu e-American Bar Association futhi bangamalungu e-The American Immigration Lawyers Association (AILA), eyasungulwa ngomhla ka-14 ku-Okthoba 1946 futhi iyinhlangano yamabha yokuzithandela enabameli abangaphezu kuka-15.000 kanye noprofesa bezomthetho abenza futhi bafundise umthetho wabokufika.
Usizo Lokufika Kwelase-Australia
Ababonisi bethu nabameli bethu base-Australia babhaliswe ne-Migration Agents Registration Authority (MARA) okuyinhlangano esemthethweni yokubhalisa yabeluleki bokufuduka base-Australia njengoba kudingeka ngokomthetho wase-Australia.
Abaxhumanisi Bokufika KwelaseCanada Regulatory Council
Ababonisi baseCanada bokufuduka abahlinzeka ngezinsizakalo zokufika kwamanye amazwe kumakhasimende ethu bangamalungu e-Immigration Consultants of Canada Regulatory Council. Abaxhumanisi Bokufuduka Komkhandlu Wokulawulwa KweCanada (ICCRC) (iConseil de Réglementation des Consultants en Immigration du Canada (CRCIC) yisiphathimandla esilawula izwe lonke esakhiwe nguHulumeni waseCanada ukwengamela nokuvikela abathengi abadinga izinsizakalo zeCanada Immigration Consultants.
I-Latin American Corporate Counselling Association
Abalingani bethu abasebenza eLatin America bangamalungu e-LACCA. I-Latin American Corporate Counsel Association ihlangana ngokuhola phambili ekululekeni ngaphakathi ezindlini isebenza esifundeni, ibanikeze ithuba lokuxhumana, babelane ngemibono futhi benze okungcono kakhulu futhi baxhumane nontanga kulo lonke iLatin America.
Inhloso esemqoka yaseYurophu yaseYurophu ukuhlinzeka ngezokuvikelwa okusemthethweni kwezakhamizi, izinhlangano nezinkampani.
Abahlanganyeli be-Strategic Online
Sibonga ngokukhethekile ku-Send Plus, ngokusekelwa kwabo nokuthembela kithi.
Sisanda kusho okumbalwa kwe-Certification yethu kanye nobambiswano.
Ngenxa yezizathu zobungcweti, kunzima kakhulu ukudalula zonke izinhlangano zethu, kepha, sizibophezele ukukunikeza ukusekelwa okuhle kanye nezinsizakalo, ukuze ufinyelele izinhloso zakho, izifiso zakho nokuthunywa kwakho, cishe noma kuphi emhlabeni ngamanani entengo amahle kakhulu futhi isakhiwo semali.
* Qaphela Asemukeli isabelo lapho sinokungabaza okuncane kokunikeza isiqinisekiso senkonzo esingcono kakhulu.